अस्पतालमा डेंगुका बिरामीको चाप घटेन, ‘डेंगु खोज र नष्ट गर’ अभियान सुरु - Everest Dainik - News from Nepal
अस्पतालमा डेंगुका बिरामीको चाप घटेन, ‘डेंगु खोज र नष्ट गर’ अभियान सुरु
काठमाडौंः सरकारीमा अस्पतालमा मात्र होइन, निजी अस्पतालमा पनि डेङ्गु रोगका बिरामीको चाप बढेको छ । सरकारी अस्पतालहरू शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जलगायतका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो छ ।
रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकार तथा स्थानीय तहले समेत रोकथामका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारले डेङ्गु नियन्त्रण गर्न ‘डेङ्गु खोज र नष्ट गर’ अभियान सुरु गरिएको छ ।
सरुवा रोग अस्पतालमा भीड
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै बिरामी पुग्ने गरेका छन् । दैनिक ५०० जनाको डेङ्गु परीक्षण हुने गरेकोमा २५० देखि तीन सयसम्मलाई डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । विगत १० दिनदेखि सरुवा रोग अस्पतालमा डेङ्गु पोजेटिभ बिरामीको सङ्ख्या एक हजार ५०० पुगिसकेको छ । डा. शेरबहादुर पुनलगायतको पाँच जनाको टोलीबाट अस्पताल जानेबित्तिकै डेङ्गुका लागि छुट्टै एकाइ स्थापना गरेर बिरामीको उपचार भइरहेको छ । डेङ्गुको आशङ्का गरिएका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ ।
डा. पुनलगायतका चिकित्सक टोलीले दैनिक ८० देखि १२० जना बिरामीलाई जाँच गरिरहेको छ । डा. पुनले आफूले डेङ्गुको लक्षण लिएर आएका बिरामीको दैनिक १२० जनासम्मको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको बताए । मलगायत अन्य चिकित्सकले पनि त्यही हाराहारीमा बिरामी हेरिरहनुभएको छ, डा. पुनले भने, “अहिलेसम्म डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या घट्ने होइन, झन् बढ्दो छ ।”
याे पनि पढ्नुस डा. सन्दुक रुइतलाई पनि डेंगु, परिवारका अरु २ जनालाई पनि संक्रमण
टेकु अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये ताहचल, भोटेबहाल, कुलेश्वर र डल्लुका बिरामी धेरै छन् । डा. पुनले भने, “डल्लु क्षेत्रका बिरामी घरैपिच्छे आएका छन्, कुनै घरका परिवारसमेतलाई डेङ्गु फैलिएको छ ।” उनले तत्काल डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या घट्ने क्रममा नरहेको बताए । यही अवस्था रहे अझै डेढ महिनासम्म बिरामी घट्नेभन्दा बढ्ने बढी हुन्छ, पुनले भने, “जबसम्म लामखुट्टेको सिजन रहिरहन्छ तबसम्म डेङ्गु घट्दैन ।”
त्रासको अवस्था छैन डा. पुनले भने, “घरघरमा डेङ्गुको सङ्क्रमण हुँदा आफूलाई पनि डेङ्गु सर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सबैमा देखिन्छ ।” शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बाँस्तोलाले गाउँका भन्दा सहरी क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा रहेको बताए । डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले एसिया क्षेत्रमा डेङ्गुले महामारीको रूप लिएको भन्दै उनले कतिपय देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकालको समेत घोषणा गरिसकेको बताए ।
याे पनि पढ्नुस कृषिमन्त्री खनाललाई डेँगु, ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना
टाउको र शरीर दुख्ने, ज्वरो आउने, थकाइ लाग्नेजस्ता लक्षण देखापर्नासाथ चिकित्सककहाँ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । डेङ्गुले कुनै व्यक्ति पनि सुरक्षित नहुने भन्दै उनले नियन्त्रणका लागि सरकारले अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकका ५४ जिल्लालगायत राजधानीमा समेत डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएकाले यसलाई राष्ट्रिय विषय बनाउनुपर्ने बताए ।
वीरमा ४५ जनालाई डेङ्गु
यसैगरी वीर अस्पतालमा आइतबार र सोमबार डेङ्गु परीक्षण गरिएकोमा ४५ जनामा डेङ्गु पोजेटिभ देखिएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले ९८ जनाको डेङ्गु परीक्षण गरिएकोमा ५५ जनामा पोजेटिभ देखिएको बताए । उनले तीमध्ये केहीलाई अस्पतालमै भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको जानकारी दिए । अस्पतालले डेङ्गुका बिरामी सरुवा रोग अस्पतालमा रेफर गर्ने गरेकोमा बिरामी अत्यधिक आउन थालेपछि वीरमै डेङ्गुको किटको व्यवस्थासहित उपचार गर्न सुरु गरेको हो ।
पाँच हजार ९५ जनामा डेङ्गु
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार साउनदेखि भदौ २३ सम्म पाँच हजार ९५ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस डेंगु संक्रमितलाई शय्या अभावः अस्पतालका सात स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि डेंगुको संक्रमण
महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तम प्याकुरेलले गत वैशाखदेखि असारसम्म जम्मा तीन हजार ४२५ र साउनदेखि हालसम्म पाँच हजार ९५ जनामा डेङ्गु भएको बताए । उनले तीमध्ये काठमाडाै, डोटी, रुपन्देही, चितवनमा पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको बताए ।
भक्तपुरमा ९७ लाई डेङ्गु
विगत केही दिनयता भक्तपुरमा फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रण बाहिर गएको छ । भक्तपुर स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर मिजारका अनुसार हालसम्म भक्तपुरमा ९७ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ ।
उनले केही दिनयता भक्तपुरमा अत्यधिक डेङ्गुका बिरामी देखा परेको जानकारी दिँदै नियन्त्रणका लागि समेत प्रयास भइरहेको बताए । विद्यालयमा गएर जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य प्रमुख मिजारले स्वास्थ्य कार्यालयबाट टोलटोलमा गई डेङ्गुबारे सचेतना जगाउने काम पनि भइरहेको बताए । उनले विशेषगरी भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा डेङ्गुका बिरामी अत्यधिक देखिएको बताए । गाेरखापत्र दैनिकबाट
ट्याग्स: डेंगु, डेंगु बिरामी